Okokwenza e-Bakgatla Resort - Pilanesberg National Park - Ukubuka Izilwane
Okokwenza e-Bakgatla Resort, Pilanesberg National Park
Izivakashi zeBakgatla kanye nezihambeli zenkomfa ziphethwe ngokuzikhethela uma kuziwa emisebenzini ngesikhathi se-safari eduze kweSun City.
I-Bakgatla Resort inikeza imisebenzi enhle yangaphandle, njengemoto yokuzivocavoca noma eqondiswayo, ukubuka izinyoni nokuvakasha okuthakazelisayo okufana nokushisa kwe-air hot, i-quad ngebhayisikili nokuhamba. Izindlovu zibuyele emuva kanye nezikhathi zokusebenzisana nalezi zinsipho ezimnandi nazo zingenzeka ngenkathi epheka eduze kweSun City.
Izilwane ezikhona ePilanesberg National Park zihlanganisa i-Big Five kanye neCheetah, i-Brown Hyena, i-Sable, i-Giraffe, i-Zebra, i-Hippo, i-Crocodile, i-Springbok ne-Impala okuthiwa abambalwa. Izinyoni ezivame ukutholakala ezindaweni ezihlukene, njenge-Red eyed Bulbul no-Black eyed Bulbul zikhona epaki ngenxa yokungaqabuki okungajwayelekile kwezindawo zemifino.
Izivakashi zinikezwa amathuba amaningi okuzwa izimangaliso ze-Pilanesberg. Ukushayela imoto eqondiswayo ngezingqungquthela zobuchwepheshe kusuka kabili nsuku zonke futhi ebusuku ukubuka izilwane zasendle zasendle. Kukhona imigwaqo emihle kakhulu engamakhilomitha angama-200 ukusuka ku-self-drive safari ngaseSun City. Izikhumba eziningana kanye nezindawo zepikiniki ezibukeka zivumela izivakashi ukuba zijabulele nakho okuhlangenwe nakho kwe-out-of-car.
Ukubuka izinyoni kunhle kakhulu ngezinhlobo ezingaphezu kuka-300 eziqoshiwe. Kukhona abafuduki kanye nezakhamuzi ezihlala njalo. Ezinye izinhlobo zidla inyamazane noma zidla inyamazane kanti ezinye zidla imbewu, izithelo noma izinto ezincane zamanzi. Lapho izivakashi zibuyela eBakgatla Resort, zingakujabulela ukugibela echibini futhi izingane zingakwazi ukululaza imilenze endaweni yokudlala.
I-hot-air balloon safari
I-quad ngebhayisikili eduze ne-Letsatsing Game Park
Inhlanganisela yesikhombisa semisebenzi
I-Sun City - igalofu, i-superbowl, ikhasino, i-waterpark, i-Lost City